Hogaamiyihii la riday ee Suudan oo maxkamad loosoo taagayo eedeyn culus
Hogaamiyihii la riday ee Suudan oo wajahaya eedeymo musuqmaasuq
Cumar Xasan Al Bashiir oo loo haysto dambiyo oo dil toogasho ku muteysan karo ayay maanta bilaabaneysaa maxkamadeyntiisa.
KHARTUUM, Suudaan – Madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa waxaa lagu wadaa in maxkamad loosoo taago eedeymo ay kamid yihiin musuq-maasuq uu ku kacay 30-sano oo uu xukunka hayey.
Hogaamiyahan la afgembiyey, kaasi oo maxkamadeyntiisa ay bilaabaneyso Isniinta maanta ah, ayaa si lamid ah lagu soo eedeeyay "haysashada lacag shisheeye, wax is-dabarin iyo helida hadiyado sharci darro ah".
Al Bashiir oo xukunka ku qabsaday awood military bishii June 30-keeda, sanadkii 1989-kii, isla markaana xukunka hayey illaa 11-kii April 2019, ayaa waxaa inqilaabay bishii June cutubyo kamid ah ciidamada wadankaasi.
Dacwad oogeyaasha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay dib u furayaan kiisaska la xiriirka dambiyo ka dhan ah Al Bashiir oo ay kamid tahay "maal-gelinta argagixiso, lacag dhaqid iyo amarida khaarijinta banaan-baxayaal".
Dambiyaddan ayaa waxa uu ku muteysan karaa xukun dil toogasho ah, waase hadii ay ku cadaadan, sidda laga soo xigtay warqadda dacwad oogeyaasha.
Kahor maxkamadeynta, agaasimaha bariga Afrika ee Amnesty International, Joan Nyanyuki, ayaa bayaan ku yiri: "Maxkamadeytan waa talaabo wanaagsan oo loo qaadey dhanka isla xisaabtanka dambiyada lagu edeeyay".
Joan oo sii hadlaya ayaa wuxuu intaasi raaciyey: "Isaga waxa uu wali doonayaa oo ka go’an in uu geysto dambiyo ka dhanka ah dadka Suudaan.
Mudadii uu xafiiska joogay, Al Bashiir oo Suudaan ku hogaamiyey colaado kala duwan ayaa noqday mid ay doon-dooneysay Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah oo ku eedeysay xasuuqii Darfur.
Cumar Xasan Al-Bashiir oo tan iyo markii talada laga riday xabsi ku jiray ayaa waxa uu sidoo kale ahaa ninkii hogaaminayey midowga Suudaan kahor inta aysan xorriyadda qaadan Suudaanta Koonfureed, 2011-kii.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markan lagu wadaa inuu booqasho kale ku bixiyo dalka uu horey...
Caalamka 28.05.2018. 04:47
Afrika 11.02.2020. 20:10
Al-Bashiir oo la xukumay, go'aana laga soo saarey in loo dhiibayo ICC
Afrika 14.12.2019. 16:13